နောင်ချို မဲဆန္ဒနယ် – Yangon Hluttaw
Home / ကိုယျစားလှယျမြား၏သတငျး / ကိုယျစားလှယျမြား / ပထမအကြိမ် (၂၀၁၀-၂၀၁၅) / နောင်ချို မဲဆန္ဒနယ်
administrator August 30, 2017	ပထမအကြိမ် (၂၀၁၀-၂၀၁၅) 16 Comments 978 Views
၁။ အမည် – ဦးကျော်မြင့်
၂။ အခြားအမည် –
၃။ လူမျိုး/ ဘာသာ –
၄။ နိုင်ငံရေးစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် –
၅။ မွေးသက္ကရာဇ် –
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ –
တောင်ရှည် ကျေးရွာ ၊ နောင်ချိုမြို့နယ်
၇။ ပညာအရည်အချင်း –
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် –
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် –
၁၀။ အမိအမည် ၊ အလုပ်အကိုင် –
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်း အမည် ၊ အလုပ်အကိုင် –
၁၂။ သား/သမီးအမည် ၊ အလုပ်အကိုင် –
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ –
ရွှေညောင်ပင်ကျေးရွာ၊ မန္တလေး-လားရှိုးလမ်း၊ အုမ္ပခါးကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်ချိုမြို့နယ်
၁၄။ ကိုယ်စားပြုပါတီ/တစ်သီးပုဂ္ဂလ –
၁၅။ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် –
Previous နမ္မတူ မဲဆန္ဒနယ်
Next ကျောက်တံတား မဲဆန္ဒနယ်
yqcll9 http://pills2sale.com/ viagra cialis buy
sky casino ad music
Intended to absorb have luxurious beddings, Wi-Fi
acces and so are classically furnished. The casino sponsorsaVIP progdam by invitattion only, based exactly how to much youu play.
However, they are sometimes not available immediately.
6sgHoL https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay
xL5nqm http://xnxx.in.net/ xnxx videos
What’s up, its pleasant article concerning media print, we all understand media isagreat
itO0RF http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll